လက်ပံတောင်း သပိတ် ဖြိုခွဲမှု ဒီမိုကရေစီ ကျင့်စဉ်နှင့်အညီဟု ဆို | ဧရာဝတီ
လက်ပံတောင်း သပိတ် ဖြိုခွဲမှု ဒီမိုကရေစီ ကျင့်စဉ်နှင့်အညီဟု ဆို
| | လက်ပံတောင်း သပိတ်စခန်းများကို ဖြိုခွင်းရာတွင် အဓိကရုဏ်း နှိမ်နင်းရေးအတွက် နိုင်ငံတကာတွင် အသုံးပြုနေသော မီးသတ်ပိုက်၊ မျက်ရည်ယိုဗုံး၊ မီးခိုးဗုံးများကိုသာ အသုံးပြုခဲ့ပြီး အင်အားအလွန်အကျွံ သုံးစွဲခြင်း မရှိကြောင်း အစိုးရ သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့က ယနေ့မွန်းလွဲတွင် သတင်းထုတ်ပြန်သည်။ ယင်းသို့ နှိမ်နင်း ဖြိုခွဲခြင်းသည် ဒီမိုရေစီ ကျင့်စဉ်နှင့် အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းလည်း ဖော်ပြထားသည်။ မီးလောင်ဒဏ်ရာရသည့် သံဃာ ၂၂ ပါးအနက် ၁၅ ပါးမှာ ဒဏ်ရာ ပြင်းထန်ကြောင်း သိရှိရသည်။
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> ရာဇာ November 29, 2012 - 6:03 pm	သတင်း နဲ့ အတူ ဓါတ်ပုံတွေပါ ထဲ့ပြ ပါသလား ??????????? မီးလောင်တာတွေက ဆေးလိပ်မီး ကောက်ရိုးပုံပေါ် ကျလို့ များလားမသိ…..
Reply	a November 29, 2012 - 7:39 pm	လက်နက်မဲ့တွေကိုအင်အားသုံးဖြေရှင်းတာဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်မဟုတ်ဘူး၊တိရစ္ဆာန်ကျင့်စဉ်။အရည်အချင်းမရှိတဲ့ခပ်ညံ့ညံ့တွေရဲ့လုပ်ရပ။်
Reply	snow November 30, 2012 - 10:13 pm	အော်..တက်လည်းတက်နိုင်တယ်…